minthantzaww: ကျမ္မာေ၇းအတွက် သိသင့်တာလေးများ လေလာစ၇ာများ
Posted by aung at 19:03 No comments:
Labels: ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစုများ
မနက်အိပ်ရာ နိုးထပြီး ချိန်တွင် ချက်ချင်း ရေသောက်ခြင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပြည်သူ များစွာ အတွက် နေ့စဉ် ပြုမူ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အရေးပါသော ကျန်းမာရေး လုပ်ဆောင်မှုလေး ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ထို့အပြင် သိပ္ပံပညာရှင်များ သုတေသန ပြုချက်အရ ၎င်းဟာ အလွန် အရေးပါပြီး ကောင်းကျိုး များစွာ ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ နံနက်ခင်း ရေသောက် ပေးခြင်း အားဖြင့် သင့်ရဲ့ တစ်ညတာ ပင်ပန်း တစ်ကြီး လှုပ်ရှား ခဲ့ရတဲ့ အစာအိမ် အတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်နေ့တာ အတွက် အဆင် မပြေမှုများ၊ စိတ်သောကများ အတွက်ပါ ရေရဲ့ အစွမ်းကြောင့် လန်းဆန်း သွားစေ နိုင်ပါတယ်။
ဒါကို ဂျပန် ဆေးပညာရှင် တွေက ၉၆ ပါး ရောဂါနှင့် များစွာသော အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများ အတွက် အလွန်ပင် အစွမ်းထက်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ခဲ့တာပါ။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်း နွမ်းနယ်ခြင်း၊ အဆစ်မြစ် ရောင်ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးတုန်ခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန် ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ အသဲ အဆီဖုံးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာ ဖြစ်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်ခြင်း၊ တီဘီ၊ ဦးနှောက် အမြှေးရောင်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဝမ်းလျှော ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ကင်ဆာနှင့် ရောဂါ များစွာ အတွက် ရေကို နည်းလမ်း တကျ နံနက်တိုင်း သောက်သုံးခြင်း အားဖြင့် ရောဂါ များစွာကို ကြိုတင် ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်မှာပါ။
၁။ မနက် အိပ်ရာထပြီး သွားမတိုက်ခင် ၁၆၀ မီလီမီတာရှိ ဖန်ခွက်ဖြင့် ရေ ၄ ခွက် သောက်ပါ။
၂။ ထို့နောက် သွားတိုက်၊ မျက်နှာ သစ်ပြီးပါက ၄၅ မိနစ်အတွင်း မည်သည့် အရာမှ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ၄၅ မိနစ် ပြည့်ပြီးမှ ပုံမှန်အတိုင်း စားသုံးပါ။
၃။ နံနက်စာ စားပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်း၊ နေ့လည်စာနှင့် ညစာစားပြီး ၂ နာရီအတွင်း အခြား အရာများ စားသောက်ခြင်း ရှောင်ပါ။
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ အတွက် ပုံမှန် လုပ်ဆောင် သွားပါက ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရာတွေကို လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ် ..
Posted by aung at 07:47 No comments:
မကြာခဏ နုံးချည့်ညောင်းညာတက်သူတို့ အင်အားတိုးစေမည့် နည်းလမ်းများ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘ၀လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ...
Posted by aung at 10:04 No comments:
၀မ်းချုပ်နေချိန် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်သော အစားအစာများ
ဝမ်းချုပ်တာဟာ လူတိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပါ။ လူတိုင်း ဆိုပေမယ့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ပုံစံ မျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းမသွားဘဲ နှစ်ရက်၊ သုံးရက် လောက် ကြာလာချိန်မှာတော့ ဝမ်းသွားရ ခက်ခဲမှု နဲ့အတူ ဝမ်းသွား ချိန်မှာ စအိုက နာကျင် လာပါတော့တယ်။
အချိန်ကြာလာရင် စအိုကွဲရာ ကနေ သွေးပါလာတတ် ပါတယ်။ ဝမ်းသွားနေချိန်မှာ မစားသင့်တဲ့ အစား အစာတွေရှိပါတယ်။ ဖော်ပြပါအစားအ စာတွေကို စားမိရင် သင့်ကို ဝမ်းပိုချုပ် စေတဲ့အပြင် မအီမသာဖြစ်စေပါတယ်။
ဆော်ဒါပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေ၊ ဟော့ဒေါ့နဲ့ ဟမ်ဘာဂါလို အစားအစာ တွေ၊ ချောကလက်နဲ့ ချောကလက် ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဝမ်းချုပ် နေချိန်မှာ ရှောင်သင့် ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက် ပေါက်၊ ချိစ်နဲ့ ကိတ်မုန့်ခြောက်တွေကို ရှောင်ပါ။ ပီဇာတွေကိုလည်း အသီးအနှံနဲ့ ပြုလုပ်ထား တာမျိုးကိုသာ စားသင့်ပြီး အသားနဲ့ ပြုလုပ်ထာ တာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ အသားတွေထဲမှာ ကြက်သားနဲ့ ကြက် ဆင်သားလိုမျိုး အဖြူရောင်အသားတွေ ကိုသာစားသင့်ပြီး ကင်စားတာထက် ချက်ပြုတ် စားသောက်တာက ပိုကောင်း ပါတယ်။ အကင်စာတွေ ကို ရှောင်ပြီး ရေခဲနဲ့ ရေခဲမုန့်တွေကိုလည်း ဝမ်းချုပ်နေစဉ်မှာ ရှောင်ပါ။ အသင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အ စားအစာတွေကို ဝမ်းချုပ်နေစဉ် ခဏ ရှောင်ထားပါ။ ငှက်ပျောသီးနဲ့ ကာဗို ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့ အစားအစာ တွေကို လည်းရှောင်ပါ။
ဝမ်းချုပ်နေစဉ်မှာ သံပရာသီးတစ် ခြမ်းကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲမှာ ညှစ်ထည့် ပြီး တစ်နေ့တစ်ခွက်သောက်ပေးပါ။ ဂျုံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အချိုနည်းမုန့်တွေနဲ့ လတ် ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေကို စားပေးပါ။စွပ် ပြုပ်၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ လိမ္မော်သီးနဲ့ ပျားရည်ရောထားတဲ့ ဖျော်ရည်မျိုးတွေကို သောက်ပေးပါ။ ဟင်းရွက်တွေနဲ့ ပြုလုပ် ထားတဲ့ စွပ်ပြုတ်မျိုးကတော့ ဝမ်းချုပ်နေ ချိန်မှာ အစားသင့်ဆုံး အစားအစာပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်နေချိန်မှာ ငါးလည်းစား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်နေချိန် စားသင့်သော အစာစားနည်း ပုံစံ ဝမ်းချုပ်နေချိန်မှာ အစာကို လျှော့စားရမယ် ပိုစားရမယ်ဆိုပြီးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့ စားသောက်မှု ပုံစံတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်း အစာများများ စားတာကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး အတွက် ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှုကို ကောင်းစေပါတယ်။ လူ တစ်ယောက် အတွက် တစ်နေ့တာလုံး လှုပ်ရှားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်က စွမ်းအင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ မနက်ခင်း အိပ်ရာက နိုးထလာချိန်မျိုးမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားချိန် လောင်ကျွမ်းဖို့ အစာ ကောင်းကောင်း စားထားဖို့လိုပါ တယ်။ မဟုတ်ရင် စွမ်းအင်တွေကို ခန္ဓာ ကိုယ်က ထုတ်သုံးရတဲ့အတွက် မောပန်း လွယ်တတ်ပါတယ်။ မနက်စာစားပေး တာကြောင့် အစာလည်း ကြေလွယ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ် ပုံမှန်အလုပ်လုပ် နိုင်ပြီး ဝမ်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို ရပ်တန့်သွား စေကာ ပုံမှန် ဝမ်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အချိန်မှန်မှန် စားသောက်ပါ အစာစားချိန် မှန်ကန်မှုမရှိတာက လည်း သင့်ကို ဝမ်းချုပ်စေတဲ့ အကြောင်း ရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစာစားချိန် မမှန်ကန်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အစာခြေစနစ်တွေက ပုံမှန်မဖြစ်ဘဲ ကြာ လာတဲ့အခါမှာ ဝမ်းချုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းစာကို ပုံမှန်စားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ နေ့လယ် အနပ်ကြီးတစ်နပ်ကို ဘယ်အ ချိန်မှာ စားမယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ပုံမှန် အဲဒီအချိန်အတိုင်း စားပေးပါ။ အမျှင်ဓာတ်ကို ပိုစားပါ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အစားအစာ တွေက အစာခြေစနစ်ကို ကောင်း မွန်စေ တာကြောင့်ပါ။ အမျှင်ဓာတ်က ဆာလောင်မှုကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေတာ ကြောင့် အစာလျှော့စားနေသူတွေအနေ နဲ့ အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်တဲ့ အစားအစာကို ပိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်း သီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ သစ်သီး ဖျော်ရည်တွေကို သောက်သုံးပေးပြီး ထမင်းစားချိန်တိုင်း ရေတစ်ဖန်ခွက်လောက်တော့ သောက်ပေးပါ။ စားတဲ့ ထမင်းဟင်းထဲမှာ လည်း ဟင်းချို၊ စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်လောက် ပါဝင်အောင် စားသုံးပေးပါ။
Posted by aung at 03:28 No comments:
သင့်မှာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ခုခု ဖြစ်နေပြီး ပိုက်ဆံ ကုန်မှာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသောက်ရမှာ ကြောက် နေလို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြရ မှာ ဝန်လေးနေရင် ငွေကုန် ကြေးကျ သက်သာနိုင် တဲ့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ဈေးသိပ်မကြီးလှတဲ့၊ အိမ်တွင်း မှာပဲ ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ ဆေးဝါးမှီဝဲသလို မျိုး ရောဂါတွေ ပျောက်ကင်းတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူ တွေက သဘောတူထားကြပါတယ်။
၁။ မလိုင်အပြည့်ပါဝင်သော နို့ထွက်ပစ္စည်း အသုံးပြုပြီး ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်ပါ
မလိုင်အပြည့် ပါဝင်တဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင် တယ်လို့ ဟားဗတ်မှ သုတေသီတွေက တွေ့ရှိထားပါ တယ်။ သူတို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် လေ့လာမှုအရ မလိုင်အပြည့် ပါဝင်တဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင် တဲ့ ဒီဒြပ်ပေါင်း Trans-Plamitoleic Acid ကို အမြင့်မားဆုံးရရှိထားသူတွေဟာ သွေးတွင်းသကြား ဓာတ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဆီးချို ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင် တယ်လို့ သိရပါတယ်။Trans-Plamitoleic Acid ဟာ ကြွက်သားတွေမှ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိ ထိရောက်ရောက်လောင်ကျွမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် လို့ သုတေသီတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ နေ့စဉ် မလိုင်အပြည့်ပါဝင်တဲ့ နွားနို့ ဒါမှမဟုတ် ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်၊ ဒါမှမဟုတ် မလိုင်အပြည့်ပါတဲ့ ဒိန်ခဲ တစ်အောင်စ စားပေးပါ။
၂။ ပဲဟင်းစားပြီး သွေးဖိအားကျဆင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ
UCLA မှ သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ ခွက်တစ် ဝက်စာ ပဲဟင်းကို နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တစ်လအတွင်းမှာပဲ သွေးဖိအား ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ပဲဟင်းတစ်ခွက်စာမှာ ပိုတက်စီယမ် ၅၉၄ မီလီဂရမ် ပါဝင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ပြောကြ ပြီး ဒီပိုတက်စီယမ်ဟာ နှလုံးသွေးကြောတွေကို Relax ဖြစ်တာကြောင့် သွေးဖိအားမြင့်တက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်များ စွာပါဝင်တဲ့ တခြားအစားအစာတွေကတော့ အခွံမာ သီး၊ သစ်သီးခြောက်၊ ဟင်းနုနယ်နဲ့ အာလူးတို့ဖြစ်ပါ တယ်။
၃။ အနီရောင်ဂရိတ်ဖရုသီးစားပြီး ကိုလက်စထရောအဆင့် ကို လျှော့ချပါ
အနီရောင်ဂရိတ်ဖရုတ်သီးကို နေ့စဉ်စားသုံးရင် မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော (LDL) အဆင့်ကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်တယ်လို့ ဂျေရုဆလင် တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်မျိုး ဟာ ကိုလက်စထရောအဆင့်တွေ အရမ်းမြင့်မားနေ ပြီးStatin ဆေးဝါးကို မတိုးသူတွေအတွက်ပါ အကျိုး ရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနီရောင်ဂရိတ်ဖရုသီးမှာ များစွာပါဝင်တဲ့Limonin ခေါ်တဲ့ အပင်ဒြပ်ပေါင်း တွေဟာ အသည်းမှ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော (LDL) ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်လို့ပါလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ နေ့စဉ် ဂရိတ်ဖရုသီး စားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ အပိုဆုအနေနဲ့ သုံးလအတွင်း ပေါင် ၂၀ အထိ လျော့ ကျနိုင်တယ်လို့ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်မှ သုတေ သီတွေက ဆိုပါတယ်။
၄။ ညပိုင်းမှာ ငါးအဆီကို စားသုံးပြီး နာကျင်မှုဝေဒနာကို လျှော့ချပါ
ငါးအဆီကို နေ့စဉ် ၂၀ဝ၀ မီလီဂရမ်မှ ၃၀ဝ၀ မီလီဂရမ်အထိ သုံးရင် အဆစ်နဲ့ ကြွက်သားနာကျင်မှု ဝေဒနာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာနိုင်တာကြောင့် လေ့လာမှုပေါင်း တစ်ဒါဇင်ကျော်အရ သိရပါတယ်။ ငါးအဆီဟာ နာကျင်မှုဝေဒနာဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော် နိုင်တဲ့ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပြီး အနာကျက်နှုန်း မြန်ဆန်စေကာ နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားမှုရအောင်၊ အလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့ အာရုံကြောတွေကို နှစ်သိမ့်ပေး နိုင်ပါတယ်လို့ မန်ဆာချူးဆက်ရောင်ရမ်းမှု သုတေ သနအဖွဲ့မှ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Barry က ပြောပါတယ်။ ငါးအဆီကို ညပိုင်းမှာ မှီဝဲရင် ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။ အိပ်နေစဉ်မှာ ငါးအဆီကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်း အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ Texas တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
၅။ အအိပ်လျှော့ပြီး ဓမ္မတာအကြိုဝေဒနာပြင်းထန်မှုကို လျှော့ချပါ
ဓမ္မတာအကြိုဝေဒနာကို စတင်ခံစားရတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လစဉ်တစ်ည လောက် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ သင်ရဲ့ အိပ်ချိန်ဇယားကို ခဏတာပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ည ၉ နာရီမှာ အိပ်ရာဝင်ပြီး မနက် ၁ နာရီမှာ အိပ်ရာမှထပါ။ သင် ရဲ့ နေ့စဉ် ပုံမှန် အချိန်ရောက်တဲ့အထိ ပြန်မအိပ်ဘဲ နေပါ။ San Diego တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက ဒီလိုပြုလုပ် တာကြောင့် ဓမ္မတာအကြိုဝေဒနာခံစားရ သူ အမျိုးသမီး ၁၀ ယောက်မှာ ရှစ်ယောက်နှုန်း သက်သာ တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မတာ အကြို ဝေဒနာခံစားရတာဟာ ပုံမှန် အိပ်/ထမှု စက်ဝန်း အ နှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက် လှုံ့ဆော်ခံရတာကြောင့် ပါလို့ The Body Clock Guide to Better Health စာအုပ်ရေးသားသူMichael က ရှင်းပြပါ တယ်။ သင်ရဲ့အိပ်စက်မှုစက်ဝန်းကို တစ်လတစ်ကြိမ် ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာနဲ့ သင်ရဲ့ ဇီဝနာရီဟာ ပြန် လည်ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်း နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၆။ မီးဖိုချောင်မှ အောက်ပါအစားအစာတွေ စားပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ
(က) မုန်လာဥနီ - သူတို့မှာ ခုခံအားစနစ် ကောင်း မွန်စေနိုင်တဲ့ ဘီတာကယ်ရိုတင်းတွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မုန်လာဥနီခွက် တစ်ဝက်စာ စားသုံးရုံနဲ့ အအေးမိဝေဒနာဖြစ်နိုင်ခြေ ၃၃ ရာခိုင် နှုန်း လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။
(ခ) ကြက်သွန်နီ - ခွက်တစ်ဝက်စာကို နေ့စဉ် စားသုံးတာကြောင့် အရိုးသိပ်သည်းဆ လေးရာခိုင် နှုန်းမြင့်တက် လာနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီမှာ အရိုး သန်မာစေတဲ့ ဆာလဖာတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။
(ဂ) ဂေါ်ဖီထုပ် - တစ်ပတ်ကို သုံးခွက်စာ စားသုံး ရုံနဲ့ သားမြတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်ခန့် ကျ ဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်မှာ သားမြတ်တစ်သျှူး တွေကို ဖျက်ဆီးမယ့် အီစထရိုဂျင်ကို ရပ်တန့်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်လို့ပါ။
Posted by aung at 04:29 No comments:
အမျိုးသမီးများကို ဝမ်းဗိုက်နာကျင်စေသော အကြောင်းရင်း
သားအိမ်တစ်သျှူးတွေနဲ့တူတဲ့ ဆဲလ်တွေဟာ နေရာလွဲမှားတည်ရှိပြီး ရာသီသွေးဆင်းတိုင်း လိုက်လံကွာကျနေတာမျိုးပါ။ ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ - ရာသီလာချိန်မှာ ရောပြီး ဗိုက်အောင့်ခြင်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားရခြင်း၊ ခါးနဲ့ခြေထောက် အထိနာကျင်ခြင်း ။
ဆီးအိတ်ထဲမှာ မကြာခဏ မသက်မသာဖြစ်ရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပါ။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဆီးအိတ်တာရှည် ရောင်ရမ်းတာပါ။ ဆီး မကြာခဏ သွားချင်တာနဲ့ ဆီးသွားတဲ့အခါ နာကျင်တာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေနှစ်ရပ်စလုံးဟာ တင်ပါးဆုံအင်္ဂါတွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ တင်ပါးဆုံကြွက်သားတွေအပေါ် နာတာရှည် ဖိအားသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်နာကျင်ခြင်း၊ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဆီးပြွန်နာကျင်ခြင်း ။
ဝမ်းဗိုက်ထဲက သွေးကြောတွေ ထုံးတာကြောင့် နာကျင်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်သွေးကြောထုံးခြင်းလိုပဲ သွေးပြန်ကြောထဲက အဆို့ရှင်တွေဟာ အားနည်းပြီး သွေးစီးဆင်းအားနည်းတာကြောင့် နာကျင်တဲ့ ဖိအားကို ဖြစ်စေပါတယ် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ စူးစူးရှရှအောင့်ခြင်း၊ နံနက်ခင်းမှာ သိပ်မနာဘဲ တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုနာကျင်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်း ။
တာရှည်မိန်းမကိုယ်နာတာဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ သေချာမသိသေးပါ။ မှိုကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို မြင်းစီးခြင်းနဲ့ ကလေးမွေးဖွားရာမှ နာ့ဗ်ကြော ထိခိုက်သွားတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်မှာ တာရှည်နာကျင်မှု ဒါမှမဟုတ် သက်သာလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက် နာကျင်မှုဟာ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်ရင်းနေရာအထိ ပျံ့နှံ့သွားတတ်ခြင်း၊ ရာသီသွေးထိန်းတောင့်ထည့်ခြင်း၊ ကျပ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ခြင်းနဲ့ အထိုင်များခြင်းတွေကြောင့်လည်း မိန်းမကိုယ် နာကျင်တတ်ပါတယ်။
Posted by aung at 05:35 No comments:
ခါးနာရခြင်း အကြောင်းရင်း နှင့် ကာကွယ် ကုသနည်း
လူတော်တော်များများ ခါးနာတတ်ကြပါတယ်။ ခါးကို အသုံးပြုများတာနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးလာတာကြောင့်ပဲ ခါးနာတတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ပါအကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကြောင့်လည်း ခါးနာတတ်တယ်လို့ သုတေသန အသစ်တွေအရ သိရပါတယ်။
၁။ ဗီတာမင် D လုံလုံလောက်လောက် မရရှိလို့ပါ
ဒဏ်ရာရလို့ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲ နာတာရှည် ခါးနာတတ်သူတွေမှာ ဗီတာမင် D လုံလုံလောက်လောက် မရရှိဘူးလို့ နာကျင်မှုဝေဒနာ အထူးကုဆရာဝန် Stewart B Leavitt က ပြောပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဗီတာမင် D အဆင့်နည်းတာဟာ ခါးနောက်ကျောရိုးအောက်ပိုင်း အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်များတာနဲ့ ဆက်စပ်တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D ကို နေ့စဉ် ၂၀၀ IU ရအောင် ပမာဏများများသောက်ပေးပါ။ ခါးနာတာ သိသိသာသာ သက်သာ ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ကင်းသွားမယ်လို့ Leavitt ကဆိုပါတယ်။
၂။ သင်ဟာ ပုံမှန်ဝမ်းမသွားလို့ပါ
အူမကြီးအောက်ပိုင်းမှာ ပိတ်ဆို့မှုရှိတာကြောင့် ခါးအနောက်ပိုင်းမှာ ဖိအားပေးခံရပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာကြာရင် ခါးနာ တတ်ပါတယ်။ ဝမ်းမချုပ်အောင် ရေများများသောက်ပါ။ အမျှင်များတဲ့ အစာများများစားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ပါ။
၃။ စိတ်ဖိစီးမှု များနေလို့ပါ
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာကျင်တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဟာ မိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ခံရတာများရင် ခါးကိုနာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုမရှိအောင် စိတ်ဖြေလျှော့နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပါ။
သင်အသက်ကြီးလာရင် ခန္ဓာကိုယ် ခါးနောက်ကျောကြွက်သားတွေ အားနည်းလာတာနဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ် ချို့တဲ့တာကြောင့် ခါးရိုးမကြီး alignment မမှန်တာ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခါးနာတာဖြစ်ရင် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ခါးရိုးကောက် နေတာလား ( Scoliosis ) ဒါမှမဟုတ် disk ပြဿနာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခါးအသုံးများလို့ ဖြစ်တာလားဆိုတာ ခွဲခြားရပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလို့ ခါးရိုးကောက်သွားတာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ မိမိအရပ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းတာ၊ ခါးရိုးကြွက်သား အားကောင်းမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာတွေ လုပ်ပေးပါ။
Posted by aung at 22:32 No comments:
ဆီချိုရောဂါသည်များအတွက် ကျန်းမာစေမည့် အမူအကျင့်များ
၂။ လမ်းလျှောက်ပြီး၊ ပင်ပန်းပြီး ချက်ချင်း မ...စားပါနှင့်။
၄။ အစာကို ခပ်မြန်မြန် မစားပါနှင့်။ ကြေညပ်အောင် ဝါးပြီးမှ စားပါ။
၅။ ရေများများသောက်ပါ။ (ရေဓာတ်ကြောင့် ကိုယ်တွင်းမှ အချိုဓာတ်နှင့် အဆိပ်များကို လျော့ကျသန့်ရှင်းစေသည်)
၆။ အကြော်အလှော်၊ အဆီအစိမ့်နှင့် အသင့်စား အစားအစာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၇။ အစားစားတိုင်း စိမ်းစိမ်းစိုစို အရွက်ပါ တွဲဖက်စားသုံးပါ။
၈။ နေ့စဉ် ကြက်သွန်နီ အစိမ်း ၂၀ မှ ၂၅ ဂရမ် ပမာဏခန့် စားသုံးပါ။
၉။ နေ့စဉ် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း အနည်းဆုံး ၁ နာရီ ပြုလုပ်ပါ။
၁၀။ ကိုယ်တွင်း ဖိုက်ဘာဓာတ် တိုးမြင့်စေရန် ဂျုံမှုန့်နှင့် ဖွဲနုဆန် တစ်ဝက်ဆီ ရောစပ် စားသုံးပါ။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘ၀လေးတွေပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေ....
Posted by aung at 19:37 No comments:
ခြေထောက် ကြွက်တက်ခြင်း နှင့် ကာကွယ်ကုသနည်းများ
ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်း ဆိုတာကို လူတိုင်း မကြုံဖူးပေမယ့် ကြားတော့ ကြားဖူးကြမှပါ။ ကြွက်တက်ခြင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခြေသလုံးနေရာနဲ့ ဒူးခေါင်းရဲ့ အနောက်ဘက်နေရာက ကြွက်သားတွေ တအား နာကျင်လာတတ်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးပါ။ တစ်ခါတလေ ခြေဖဝါးနေရာက
ကြွက်သားတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်အားဖြင့် စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကြာတတ်ပြီး တချို့တွေမှာ ၁၀ မိနစ်လောက်
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့တွေမှာ ကြွက်တက်တာဟာ တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားမှုပြီးလို့ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ကျမှ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိပ်စက်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကြွက်တက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်ပြီး ကြွက်တက်တဲ့သူ သုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်း
ဟာ အသက် ၆၀ ဝန်းကျင်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ၁၀ ယောက်မှာ
လေးယောက်နှုန်းဟာ တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ်လောက် ကြွက်တက်တတ်
အခြေအနေတစ်ခုကို အခြေခံပြီး ကြွက်တက်တာမျိုးတော့ မရှိတတ်ပါဘူး။
ခြေထောက် ကြွက်သားတွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ရုတ်တရက် ကြွက်တက်တဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ သင့်ခြေထောက်ဟာ ကွေးတာဆန့်တာကို သင်ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိနိုင်ပါဘဲ ကြွက်တက်တာမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါက ကြွက်သားတွေ ပုံစံမကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာမျိုး ဖြစ်တာကြောင့် ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးတာမျိုးနဲ့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာကတော့ တခြားကျန်းမာရေး ပြဿနာ
တွေကြောင့် သောက်သုံးနေရတဲ့ ဆေးဝါး တချို့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်
လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို အပြင်းအထန် ဖိအားပေးခံ
ရတာမျိုး၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာမျိုး၊ သွေးထဲမှာ ဆားဓာတ် မညီမျှတာမျိုး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာ၊ ခြေထောက်အတွင်း သွေးလည်
ပတ်မှု အားနည်းတာမျိုး၊ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်တာမျိုး၊ အာရုံကြော အားနည်းတာ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါကု ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးနေရတာမျိုးတွေကြောင့် ကြွက်တက်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကုသမှု ပေးနိုင်မလဲ
အကြောတွေကို ဆန့်ထုတ်ပေးတဲ့ လေ့ကျင့်မှုမျိုးနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးတာမျိုးတွေ
က ခြေထောက် ကြွက်တက်တာကို အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်မှုကတော့ ကြွက်တတ်တာ သက်သာ
သွားပေမယ့် ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ပါရာစီ
တမောလို ဆေးမျိုးတွေ သောက်ပေးနိုင်ပြီး ကြွက်တက်တာ သက်သာပြီးလို့ ၂၄ နာရီကြာမှ နာကျင်မှု သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်
မှုကြောင့် ကြွက်တက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ လုံလောက်တဲ့ ရေပမာဏ
သောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဆေးဝါးကုသမှုတွေ လိုအပ်ရင်တော့
လေးပတ်ကနေ ခြောက်ပတ်အထိ သောက်သုံးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကြွက်
တက်တာကို သက်သာစေဖို့ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဗီတာမင်ဘီကွန်ပေါင်း၊ ဗီတာမင်အီး၊ diltiazem, naftidrofuryl, orphenadrine နဲ့ verapamil ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေကို မှီဝဲပေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ကြွက်တက်တာမျိုးကတော့ ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းလေးတွေ
နဲ့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြွက်တက်ခြင်းအတွက် ဆိုရင်တော့ ကုသနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သင့်မှာ လက်ရှိသောက်
သုံးနေရတဲ့ ဆေးဝါးတွေရှိရင် အဲ့ဒီဆေးဝါးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို သိဖို့ ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံး ပြသကာ မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။ ဆေးဝါးသောက်နေ
ရသူ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်လည်း တခြားကျန်းမာရေး ပြဿနာ ရှိ၊ မရှိ ဆွေးနွေး
ကြွက်တက်ခြင်း သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများ
ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကြွက်တက်တာကို ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်ပေမယ့် သက်သာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ လေ့လာမှုတွေအရ သတ်မှတ်မထားပေမယ့် ဆရာဝန် အများစုကတော့ လမ်းညွှန်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို အထောက်အကူပြုစေမယ့် ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်နေ့ ငါးမိနစ်၊ သုံးကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ပြုလုပ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ နံရံမှာ လက်ထောက်ထားပြီး မတ်တတ်ရပ်နေကာ
ခြေထောက်တွေကိုနောက်ပြန်ဆန့်တန်းတင်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုမျိုးကို ကြွက်တက်တာ သက်သာစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်တက်ခြင်း သက်သာစေမည့် အိပ်စက်မှုပုံစံ
သင့်အိပ်စက်မှုပုံစံကလည်း ကြွက်တက်တာကို သက်သာစေဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
- ခြေထောက်အောက်ထဲမှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးခုထားပြီး သင့်ရင်ဘတ်နေ
ရာထက် အနည်းငယ် မြင့်နေအောင် အိပ်ပါ။
- ခြေထောက်ကို ကွေးကောက်နေတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ သေချာ ဆန့်တန်းပြီး အိပ်ပါ။
- သင့်ခြေချောင်းတွေနဲ့ ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကို စောင်နဲ့ သေချာလုံခြုံနွေးထွေးအောင် ထားပြီး အိပ်စက်ဖို့ လိုပါတယ်။
Posted by aung at 19:29 No comments:
နှာခေါင်းသွေး ယိုခြင်းအကြောင်းနှင့် ကာကွယ်နည်း
နာခေါင်းက သွေးယိုတာကို Epistaxis (Nosebleed) လို့ခေါ်တယ်။ Epistasis ဆိုတဲ့ မျိုးဗီဇရောဂါနဲ့ စာလုံးပေါင်း အတော် ဆင်တယ်။ နာခေါင်းက သွေးယိုတာက နှာခေါင်းရှေ့ယိုတာနဲ့၊ နောက်ကယိုတာ အမျိုးအစား ၂ ခုရှိတယ်။ ရှေ့ဖြစ်တာက အများဆုံးပါ။ နှာခေါင်း နောက်ကနေ ယိုတာက ကြာတတ်ပြီး ကုရခက်တယ်။ သိပ်ဆိုးရင် မျက်စိကနေယိုတာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ယိုတဲ့သွေးက အထဲဝင်သွားပြီး
၊ အစာအိမ်ထဲရောက်၊ များရင် အန်ထွက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
ဆားရည်ကို နှာခေါင်းထဲ ဖြန်းဖြန်းပေးသင့်တယ်။ ကောင်းတာကတော့ Normal saline ခေါ်တဲ့ သွေးကြောထဲ သွင်းပေးရတဲ့ ပုလင်းထဲက ဆားရည်ဖြစ်တယ်။ ၀ယ်ရတာ ခက်ရင် ရေသန့်သန့်ထဲမှာ အိမ်သုံးဆား ၀့၉% ရအောင် ဖျော်ပြီး၊ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် စီ ဆေးရှာမရရင် သုံပရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ ဆီးဖြူသီး စားပါလေ။
Posted by aung at 18:55 No comments:
ခေါင်းကိုက် ခြင်းသက်သာစေရန် နည်းလမ်းများ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အလွန်အဖြစ်များတဲ့ နာကျင်မှုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းလိုလို ခေါင်းကိုက်ဖူးကြပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပြီး ဖိစီးမှုကတော့ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းရင်း ရောဂါကြီးကြီးမားမား မရှိရင်တောင် နေ့စဉ်ဘဝမှာ သင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့် ခေါင်းကိုက်လာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်ဟာ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အချိန်အကြာကြီး အလုပ်လုပ်နေရင် ခေါင်းကိုက်လာနိုင်ခြေများပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်ခေါင်းကိုက်လာတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီး သင်ရဲ့အနေအထိုင် အပြုအမူတွေကို လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ အောက်ပါအကြံပြုချက်တွေက ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေမယ့် အကြံပြုချက် ရိုးရိုးလေးတွေပါ။
၁။ ကိုယ်ဟန်အနေအထားမမှန်ရင် ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း (Tension Headache) ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဟန်အနေအထား မှန်ကန်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေကြီးပါတယ်။ လည်ပင်းနဲ့ ပခုံးကကြွက်သားတွေဟာ ကိုယ်ဟန်အနေအထားမမှန်ရင် တင်းတောင့်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလုပ်ချိန်မှာ ကိုယ်ဟန်အနေအထား မှန်ကန်ဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုကြွက်သားတွေ တင်းမာဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာအတွက်တော့ ဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးတာက အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းပါပဲ။
၃။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရာသီမလာခင်ရက်မှာ ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းကိုက်တဲ့ပုံစံကတော့ မျက်စိတွေရဲ့နောက်ဘက်နားမှာ နာကျင်မှုခံစားရတာပါ။ ဒီအတွက်တော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဇင့်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ အဆီနည်းတဲ့အသားကို စားနိုင်ပါတယ်။
၄။ ခေါင်းကိုက်တာကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ ဖိစီးမှုပါ။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ဖြေလျှော့အနားယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လုံလောက်အောင် အိပ်စက်အနားယူဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်ကိုလည်း ဆက်တိုက်အကြာကြီးမလုပ်ဘဲ ခဏတစ်ဖြုတ်နားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ နာကျင်မှုဟာ လည်ပင်းနဲ့ ပခုံးတွေဆီကို ပျံ့နှံ့သွားပြီး တော်တော်လေး မသက်မသာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းကိုက်ခြင်းမျိုးအတွက်တော့ အနှိပ်ခံရင် သက်သာတတ်ပါတယ်။ ဖိစီးမှုတွေ ပြေပျောက်စေဖို့ ဦးခေါင်းနဲ့ပခုံးတွေကို ညင်ညင်သာသာနှိပ်နယ်ပေးပါ။
၆။ အစာမစားဘဲ နေတာဟာလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစာကို အချိန်မှန်မှန်စားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၈။ လဲလျောင်းနေပါ။ ပြီးရင် လည်ပင်း၊ ပခုံးနဲ့ နားထင်တွေမှာ ရေခဲကပ်ပါ။ ဒါဟာ သင့်ကိုဖြေလျှော့အနားရစေပြီး ခေါင်းကိုက်သက်သာစေပါတယ်။
၉။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေက ခေါင်းကိုက်သက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏခေါင်းကိုက်တိုင်း အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အမြဲလိုလိုသောက်နေတာက မကောင်းပါဘူး။ သင့်မှာ အစာအိမ်နာရောဂါ အပါအဝင် တခြားကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ပါ။
၁၀။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါရှိသူတွေကတော့ သူတို့စားတဲ့အစာတွေကို မှတ်တမ်းထားဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ အစားအစာတွေကြောင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လို အစားအစာတွေကြောင့် သင့်ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ မှတ်သားပြီး ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Posted by aung at 22:24 No comments:
ကျောက်ကပ် ဝေဒနာသည်များ အတွက်သတင်းကောင်း
ာ လူလည်းပင်ပန်း၊ငွေကြေးကုန်ကျမှု့ များပြားသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သိန်းထောင်ချီ၍
ချမ်းသာသောသူပင် ဒေ၀ါလီ ခံ ရသော ရောဂါ ပါ ။ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများမှာ လူလည်းနာ ငွေလဲကုန်လှပါသည်။အချိန်အခိုက်အတန့်တခုသာ
လဲလှယ်နိုင်မှသာ အသက်ဆက်နိုင်ပါသည်။ လဲဖို့စားရိတ်ကလည်း သိန်းထောင်ကျော် ကုန်ကျပါသည်။
စရိတ်သက်သာ အကုန်အကျနည်း၍ လုံးဝအထင်မသေးပါနှင့်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်ကြီးနေပြီဖြစ်သည့် HERBAL MEDICINE ကုသနည်းပါ။အနောက်
နိုင်ငံများတွင်ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပြားလာသည့် အနောက်တိုင်းဆေးများကို သောက်သုံးရန် ချင့်ချိန်လာကြပြီး သစ်ဥသစ်ဖု သဘာဝအပင်များမှ
မြန်မာပြည်တွင် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် ထုတ်လုပ်သည့် fame ဆေးတိုက်မှဆေးများ ကမ္ဘာတွင် နံမည်ရနေပါပြီ။ယခုတင်ပြသောဆေးနည်းမှာ
၂။တရုပ်နံနံပင်ငါးရွက်ကို ရေနွေးဖြူထဲတွင် ထည့်စိမ်ပါ။လဖက်ခြောက်ခပ်၍ရေနွေးသောက်သလိုသောက်ပါ။အဖတ်ဝါးစားပါ။ညနေစာစားပြီး နာရီဝက်ခန့်
ခြားပြီးမှသောက်ပါ။ အိပ်ချိန်နှင့်ဝေးပါစေ။သွေးတိုးပါကျစေသဖြင့် မျက်လုံးကြောင်တတ်ပါသည်။ည ခုနစ်နာရီဆိုလျင် သင့်ပါသည်။
၃။ကျောက်ကပ်ကြောင့် အသည်းအသန်အောင့်နေသူများ ကျောက်ဖရုံသီးကို ခွဲ အူတိုင်ထုတ်ပြီး ကျောက်ကပ်နေရာသို့ အတွင်းသားဖြင့်ကပ်၍ စည်းထားပါ။
သုံးလအနည်းဆုံးထားပြီး ဆောင်ရွက်ပါ။ကျောက်ကပ်ဆေးနေရသူများပင် အကြိမ်ရေ လျော့လာသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။
ပျောက်ကင်းသက်သာပါက လူတိုင်းအားဖြန့်ဝေပေးပါ ။ သက်သာကြသူသာတွေ့ရသဖြင့်အများအသုံးချနိုင်စေရန်ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
Posted by aung at 01:12 1 comment:
(သွေးတိုးရောဂါ Hypertension) ဖြစ်တတ်သူများနှင့် ကုသနည်းများ
လေဖြတ်ခြင်း နှလုံးရောဂါနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါကို ဖြစ်တတ်သည်။
အပေါ်သွေးပေါင်ချိန်(၁၆၀)မီလီမီတာ ပြဒါးနှင့် အောက်သွေးပေါင်ချိန်(၉၅)မီလီမီတာ ပြဒါးအထက် တောက်လျှောက်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ မြင့်တက်ခြင်းကို သွေးတိုးရောဂါ-ဟု ခေါ်သည်။
သွေးတိုးရောဂါသည် အဝလွန်သူ၊ မျိုးရိုး၌ သွေးတိုးရှိသူ၊ အဆီအဆိမ့် အချိုနှင့် အငန်အရသာရှိသော အစားအစာများကို အလွန်စားသောက်သူ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အရက်သောက်သူများနှင့်
ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးရောဂါရှိသူများ၌ ဖြစ်တတ်သည်။
သွေတိုးရောဂါလက္ခဏာများမှာ အပေါ်သွေး ပေါင်ချိန်(၁၆၀)မီလီမီတာ ပြဒါးနှင့်
အောက်သွေးပေါင်ချိန်(၉၅)မီလီမီတာ ပြဒါးအထက် သွေးပေါင်ချိန် မြင့်တက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ အကြောတပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
သွေးတိုးရောဂါကို တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင် အပင်များဖြင့် ကာကွယ်ကုသခြင်း---
(သတ္တုရည်ဆိုသည်မှာ ထုထောင်းကြိတ်ညှစ်၍ ရရှိသောအရည် ဖြစ်သည်)။
(သို့မဟုတ်) ဧကရာဇ်အမြစ်ကို ရေဖြင့်သွေး၍ တခါသောက်လျှင် ဟင်းစားဇွန်း ၁-ဇွန်း၊ တနေ့ ၃-ကြိမ် သောက်ပါ။
(သို့မဟုတ်) ဥတလုံး ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ် စားပါ။(သွေးတိုးကျဆေးက စပျစ်သီးနဲ. မတည်.)။
* အချို၊ အဆိမ့်၊ အငန်၊ အဆီနှင့် ဆီပါသော အစားအစာများ အလွန်အကျူး စားသောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
* ကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်း နေ့စဉ်မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ။
Posted by aung at 00:23 No comments:
ဆီးချို ရောဂါ သမားများအတွက် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ
ဆီးချိုရောဂါသည် သွေးတွင် အချိုဓါတ်များသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄င်းရောဂါကို အစားအစာ၊ ဆီးချိုထိန်းသောက်ဆေးများ၊ အင်ဆူလင်ထိုးဆေးဖြင့်ကုသရသည်။ စနစ်တကျမကုပါက မျက်စေ့မှုန် ခြင်း၊ ကွယ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းဝေဒနာများ ဆင့်ပွား ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အစားအသောက်ကို စနစ်တကျ အထူးရှောင်ကျဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၀သော သူများနှင့် အသက် ကြီးမှ ရောဂါ ပေါ်သော သူများသည် အစားအစာထိန်းရုံမျှနှင့် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ဆီးချိုသောက်ဆေးများမှာ နည်းလွန်းလျှင်လည်း အကျိုးမရှိဘဲ ပိုမိုသောက်ပါကလည်း သွေးထဲတွင် သကြားဓါတ်လျော့နည်းပြီး အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ထို့ ကြောင့် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မိမိအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဆီးချိုထိန်းဆေးကို အသင့်တော်ဆုံး ပမာဏအ တိုင်းမှီဝဲရမည်။ မိမိကိုယ်တိုင် ဆီးချိုစစ်ခြင်းနှင့် စိတ်ချရသော ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် သွေးချိုစစ်ခြင်းများကို မကြာခဏဆောင်ရွက်ရမည်။ ကြားဖူးနားဝရှိသောအရွက်များကို ပြုတ်မသောက်ပါနှင့်။
*အချို၏ကုန်ကြမ်းဖြစ်သောဆန်၊ ကောက်ညှင်းနှင့် ဂျုံတို့ မှလုပ်သော အစာများနှင့် မြေမှဥ သော အာလူးကဲ့သို့ သော အစာများကို တကြိမ်လျှင်တမျိုးစီသာ အလှည့်ကျ စား၍ တွဲစားပါက တစ်ခုကို လျှော့ရန်။
*အစာများကိုချေဖျက်၍ချက်ပြုတ်ခြင်းထက် ချွေ၍ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ကြော်လှော်ခြင်းထက် ပြုတ်၍စားသုံးခြင်းကပိုရ်ျသင့်တော်သည်။
Posted by aung at 00:20 1 comment:
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီပိုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
၆) ပုစွန်ဆိတ် စားပါ
Posted by aung at 06:10 No comments:
Posted by aung at 10:22 No comments:
အိမ်တွင်းကု ကျန်းမာရေး နည်းလမ်းများ
(ဂ) ဂေါ်ဖီထုပ် - တစ်ပတ်ကို သုံးခွက်စာ စားသုံး ရုံနဲ့ သားမြတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်ခန့် ကျ ဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်မှာ သားမြတ်တစ်သျှူး တွေကို ဖျက်ဆီးမယ့် အီစထရိုဂျင်ကို ရပ်တန့်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်လို့ပါ
Posted by aung at 10:20 No comments:
အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေ အတွက် သတိပေး လက္ခဏာတွေကို လျစ်လျူရှု မထားသင့်ပါဘူး။
ဒီလက္ခဏာတွေကို အစောပိုင်း အဆင့်ကတည်းက သိနားလည်မှသာ ကုသမှုကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) တင်ပဆုံ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ချက်အောက်ပိုင်း တင်ပဆုံတွင်းမှာ နာကျင်တာနဲ့ တင်းနေတာစတဲ့ လက္ခဏာ တွေကို တာရှည်ခံစားနေရရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါက ရာသီအကြို ဝေဒနာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာဖို့တော့ လိုပါတယ်။ တင်ပဆုံတွင်း နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဟာ မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ် ကင်ဆာစတဲ့ ကင်ဆာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိလို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
(၂) ဝမ်းဗိုက်ဖောင်းခြင်း၊ လေပွခြင်း ဝမ်းဗိုက်ဖောင်းတာနဲ့ လေပွတာက မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာမှာ အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လေပွတာကြောင့် ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးကိုတောင် မတပ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေတာမျိုး၊ ဘောင်းဘီဆိုက်ကြီးတာကို ဝတ်ရတာမျိုး ဖြစ်နေရင် ဒီလက္ခဏာတွေကို လျစ်လျူမရှုသင့်ပါဘူး။
(၃) ခါးအောက်ပိုင်း ကြာရှည် ကိုက်ခဲခြင်း ခါးနာတာက ခါးအောက်ပိုင်းမှာ အဖြစ်များပြီး စူးရှတဲ့ ကိုက်ခဲမှုမျိုးကို ခံစားရ တတ် ပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက ကလေးမွေးတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ခါးနာတာက မမျိုးဥအိမ် ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။
(၄) ကြာရှည် ဖျားနာခြင်း ခုနစ်ရက်ထက် ပိုကြာကြာ ဖျားရင် ဒါမှမဟုတ် အဖျားက မပျောက်နိုင်ဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။ ကြာရှည်ဖျားနာတာက ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အများအားဖြင့် ဖျားတာက တခြားအပရိက ဝေဒနာတွေရဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၅) မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမမှန်သွေးဆင်းခြင်း မိန်းမကိုယ်က ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးဆင်းတာက စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ရာသီသွေး အလွန်အမင်း ဆင်းတာ၊ ရာသီလာချိန် တစ်ချိန်နဲ့ တစ်ချိန်ကြား သွေးဆင်းတာ၊ Sex အတွင်းနဲ့ အပြီးမှာ သွေးဆင်းတာတွေ အားလုံးက ပုံမမှန် သွေးဆင်းမှုတွေဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ကင်ဆာ လက္ခဏာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာနဲ့ မမျိုးဥအိမ် ကင်ဆာတို့နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။
(၆) ဝမ်းသွားသော အလေ့အထ ပြောင်းလဲမှု ကြာရှည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာ၊ ဝမ်းထဲ သွေးပါတာ၊ လေထတာ၊ ဝမ်းအရည်ကျဲကျဲ သွားတာနဲ့ အူအလေ့အထ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေက မီးယပ်သားဖွားကင်ဆာနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာ လက္ခဏာတွေနဲ့ ဆက်စပ် နေတတ်ပါတယ်။
(၇) အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် များစွာလျော့ကျခြင်း ဘာအကြောင်းရင်းမှ မရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်နဲ့အထက် လျော့ကျ တာက ပုံမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က တစ်လအတွင်း အတက်အကျ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ၁၀ ပေါင်နဲ့အထက် လျော့ကျရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
(၈) မိန်းမကိုယ် ပုံမမှန်ပြောင်းလဲမှုများ မိန်းမကိုယ်မှာ အနာဖြစ်တာ၊ အရည်ကြည်ဖြစ်တာ၊ အရေပြား အရောင်ပြောင်း လဲတာနဲ့ မိန်းမကိုယ်ကနေ ပုံမမှန် အရည်ဆင်းတာတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
(၉) ရင်သားပြောင်းလဲခြင်း လစဉ် ရင်သား စစ်ဆေးမှုအတွင်း အဖုအကျိတ်ပေါ်တာ၊ နာကျင်တာ၊ ရင်သားက အရည်ထွက်တာ၊ ရင်သား နီမြန်းတာနဲ့ ရောင်ရမ်းတာတို့ ဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး တိုင်ပင်ပါ။
(၁၀) နုံးချည့်ညောင်းညာခြင်း အဖြစ်များဆုံး ကင်ဆာလက္ခဏာ တစ်ရပ်က နုံးချည့်ညောင်းညာတာပါ။ ကင်ဆာ အဆင့်မြင့်တဲ့အခါ ပိုမို နုံးချည့် ညောင်းညာနိုင်ပေမယ့် ကင်ဆာ အစောပိုင်း အဆင့်မှာကတည်းက သိသာထင်ရှားတဲ့ ဝေဒနာပါ။ နေ့စဉ် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်တာတောင် နုံးချည့်ညောင်းညာ နေဆဲဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
Posted by aung at 10:12 No comments:
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသောလူနာကို အမြန်ကယ်ဆယ် ကုသနည်း ... (၁) လေဖြတ်သောလူနာကို (မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ) ဖြစ်သော နေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းသယ်မခြင်း မပြုရပါ။
လူနာကိုယ်တိုင် မထိုင်နိုင်ပါက ဘေးမှတစ်ဦးက ထူမပေးထားပါ။ ပြီးနောက် ပိုးသတ်ထားသော ဆေးထိုးအပ် (သို့) လက်အပ်ဖြင့် လူနာ၏ လက်ချောင်း ဆယ်ချောင်း ထိပ်ဖျားများကို (ပဲစေ့ခန့်) သွေးတစ်စက်စီ ထွက်လာအောင် ဖောက်ပေးပါ။ ဖောက်ရုံမျှဖြင့် သွေးမထွက်ပါက လက်ဖြင့် ညှစ်ထုတ်ပေးပါ။ ထိုသို့ သွေးထွက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း လူနာပြန်လည် သတိရ လာပါလိမ့်မည်။
လက်တွေ့ ပျောက်ကင်း သက်သာ စေသောနည်း ဖြစ်ပါသည်။ လေဖြတ်ခြင်း ဝေဒနာမှ ကင်းဝေးစေရန် အတွက် ကုသိုလ်ပြုလိုက်ပါသည်။
Posted by aung at 09:24 No comments:
Posted by minthantzaww at 08:38
Labels: ကျမ္မာေ၇းအတွက် သိသင့်တာလေးများ လေလာစ၇ာများ